Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguBernd
Wamkelekile kubunewunewu kunye nekhabhathi yothando "Hirsch" kwiLachtal entle, ebekwe ngokuthe ngqo kumathambeka. I-chalet entsha kraca kwaye igqitywe ngoDisemba 2018. Ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezili-10 ziya kukwazi ukonwabela eyona ntuthuzelo iphezulu kunye nezinto eziluncedo. Ikhabhinethi ikwi-1700 yeemitha ngaphezu komphakamo wolwandle kwaye ngoko ilungele ubusika nasehlotyeni.
Le chalet yahlukile kuba ilungile kwinduli ye-ski kwaye iindwendwe zinokutsiba ngaphakathi kwaye ziphume. "I-Chalet Hirsch" idibanisa bonke ubunewunewu bale mihla kunye ne-rustic charm kunye ne-flair. Indawo yomlilo yeyona ndawo iphakathi kule chalet kunye nekhitshi elivulekileyo kunye negumbi lokuhlala lenza ukonwabisa. Lilonke, iphaneli yokulawula i-Loxone smart-home (makhe undwendwe lulawule ngokulula iheater), ii-smart-tv's ezi-5, isixokelelwano esingqonge iBose kunye nesauna eyakho ijikeleza ubunewunewu bale chalet imangalisayo.
Ebumelwaneni kukho iindawo zokutyela ezininzi ezikufutshane kunye ne-apres Ski bar enye kumgama weemitha ezili-100 kuphela. Kwakhona, induli yokutyibilika ilungile ecaleni kwe-chalet kwaye kumgama omfutshane wokuhamba iindwendwe zinokufikelela kwinduli esledding, elungele ulonwabo losapho.
Nceda uzive ukhululekile ukuqhakamshelana nam ngalo lonke ixesha unemibuzo. Ndizakuzama kangangoko ukunceda ngexesha elifanelekileyo.